Ukutya okunengqondo, Indlela ekufundisa ukuba utye uzazi Discover ➡ Discover Online Online ➡️
Yitya ngononophelo olupheleleyo. Ngalo lonke ixesha zama ukutya ngengqondo, uqaphele uhlobo lokutya okutyayo kunye nencasa, ukukhupha elona xabiso liphezulu. Yiyo le nto yokutya okushumayelayo, indlela yemileniyali esetyenziswa ngokubanzi ekuziphatheni okunesondlo kwaye iphakamisa ukwazisa ngeempawu kunye neempendulo kwisenzo sokondla, ukugcina umdla wokufuna umbono woluvo.
1 Yintoni kunye nendlela esebenza ngayo
2 Ukutya ngengqondo kunye nokulahleka kobunzima
3 Izibonelelo zokutya ngengqondo
4 Iingcebiso ngokuziqhelisa ukutya
Yintoni kunye nendlela esebenza ngayo
Ukutya okucebisayo kuphakamisa umceli mngeni kuluntu lwanamhlanje, ngaphandle kwexesha, ukuqondisa kwakhona, ukuphakamisa ulwazi kunye nokucaca ngokupheleleyo xa kufikwa ekutyeni.
Ukutya ngokuzazi kuyimfuneko ukuqonda iimvakalelo ezingenelela kuyo yonke inkqubo yokutya, kokubini ngokwasemzimbeni nangokweemvakalelo, kwindlala, ukutya okukhethiweyo, ukulungiswa kwemenyu kunye nokugcwala xa sonelisekile emva kokuphela kwesidlo ukutya.
Izikhokelo ezilula kakhulu zinokuba nefuthe elikhulu kwiziphumo. Ukuqala ukutya ngesaladi, ukungabi nakutya etafileni (ukutya okulungisiweyo) kunye nokutya ngokuzazi nangokuthe chu, kuba isingqisho sesidlo kubalulekile ukuba siqaphele ukuphendula ngokuhlutha kwaye oku kuthatha ngokomyinge kwimizuzu engama-20 emva kokuqala kwesidlo.
Ngalo lonke ixesha ucinga malunga nokutya ukutya, cinga uze uzibuze, Kudala ndagqibela nini ukutya? Ukuba ibingaphantsi kweeyure ezintathu ezidlulileyo, zibuze kwakhona, Yintoni oyilambeleyo? Ukuba ziiyure ezintathu okanye nangaphezulu, kusenokwenzeka ukuba sisidingo sesondlo, kodwa ukuba sifutshane, inokuba luxinzelelo, lusizi, okanye nokuba lunxaniwe.
Ukutya ngengqondo kunye nokulahleka kobunzima
Ngokokutya okuthathelwa ingqalelo, akukho kugqithisa "kulungile" xa kufikwa ekutyeni. Ukuba ubudlelwane nokutya akulunganga, buye buyeyona nto iphambili, bonyusa ukungoneliseki kunye nokungazithembi, okukhokelela kukhetho olubi etafileni, kwisangqa esikhohlakeleyo.
Nangona ayikokutya (obu buchule abusebenzi kuthintelo, isicwangciso sokutya, ukubala kweekhalori okanye ukutya okungavumelekanga), le nto inokunceda kulawulo lobunzima. Umahluko kukuba le ndlela ifuna ukubonelela ngolwalamano olutsha nokutya, ukutshintsha umkhwa wokutya okungalungelelananga kunye nokuzama ukuzisa lo mkhwa uqinisekileyo ebomini.
Ukwala indlela yokucinga yinyathelo lokuqala lokutya okunomdla, ukufuna ubudlelwane obunempilo kunye nokutya. Zahluke kakhulu kwimigqaliselo yesiqhelo yokutya kwaye zifuna ukunxibelelana kwakhona neempawu zangaphakathi zolawulo lokutya.
Ifilosofi yokutya ikwafuna ukufundisa ukwahlula indlala ebonakalayo embindini wokukhutshwa kweemvakalelo ezininzi ngaxeshanye eziveliswa kubomi bemihla ngemihla. Abantu abaninzi badla ukuzama ukugcwalisa omnye umsantsa, ongengawo indlala, njengokudikwa, usizi, unxunguphalo, okanye uxinzelelo. Olu luvo lubalulekile. Ukufunda, ukumamela umculo, ukubukela umabonwakude, ukuhlala kwiselfowuni okanye ithebhulethi kuthanda ukuyiphazamisa ingqwalaselo yethu ekutyeni kwaye kusithintele ekubaxeni. Oku kuyonakalisa kakhulu, kwaye kuyahambelana nenkqubo yokuqonda kunye nokwazisa ngexesha lokutya.
Izibonelelo zokutya ngengqondo
Ukuxhalaba, ukunyanzelwa ukuba utye, ukuphazamiseka kwemood, uxinzelelo, uxinzelelo lwasemva koxinzelelo, iintlungu ezingapheliyo, umhlaza, ukusetyenziswa gwenxa kweziyobisi, phakathi kwezinye iimeko zeklinikhi: zonke zinokulawulwa ngcono kuqheliselo lokutya okunengqondo.
Kulabo bamkela olu hlobo lokutya, izibonelelo ezininzi sele ziqwalaselwe, ezinje: ukunciphisa umngcipheko wokuphazamiseka kwindlela otya ngayo, ukunciphisa ukunyanzeliswa okunxulumene nokutya, ukungeniswa ngaphakathi kweenjongo zokubhitya, umanyano lokonwaba kokutya, kuncinci Ukutya ukutya kunye nokunqwenela ukutya okuncinci.
Le ndlela ikwavumela ukuziqonda ngokwakho, izenzo zomntu, kunye nokuzibamba nokuzithemba, enika ithuba elincinci lokuziphatha okungafunekiyo, okungenangqondo, okubaxekileyo kunye nokuziphatha okunyanzelekileyo. Konke oku kubonakala ekunciphiseni i-BMI (isalathiso sobunzima bomzimba), kunye nokuphuculwa kweprofayili ye-metabolic kunye nempilo yengqondo.
Iingcebiso ngokuziqhelisa ukutya
Zinikele ngokupheleleyo kuso nasiphi na isidlo uphephe ukwabelana ngengqwalaselo yakho nezinye izinto okanye iziphazamiso, ezinje ngezixhobo ze-elektroniki;
Hlala phantsi utye endaweni yokuma phambi kwefriji, ulandele iipateni ze "pinch", ezenza kube nzima ukuqonda ukutya kumgangatho kunye nobungakanani;
Nandipha konke ukuluma: nikela ingqalelo kwivumba, iqondo lobushushu kunye nokwakheka kokutya;
Iidayari zokutya zinokunceda abantu ukuba babenolwazi ngakumbi kwaye babonakale kwinto abayityayo. Akunjalo kwakona el mundo Inokufumaneka kunye nentlangano yokwenza, kodwa abo banayo banokunceda;
Lungisa ukutya kwakho ngononophelo, uhoye zonke iinkcukacha. Yonke le yinxalenye yenkqubo yokondla ngokwakho. Ukutya okuqondayo sisimemo sokwazi zonke ezi mvakalelo.